EyoMsintsi 25, 2018 admin
imiba Japan “Order Improvement Business” kutshintshiselwano crypto emva $ 60m lomnqweno yimfumba
Ministry yaseJapan wezeMali wambetha Osaka-based Tech Bureau, nomsebenzisi cryptocurrency exchange mvume Zaif, with "izohlwayo zolawulo" kuquka inani nezigunyaziso uyanyanzeliswa emva lomnqweno yimfumba kwiveki ophelileyo.
ngokukodwa, inkampani ngoku kufuneka ukufumanisa izibakala nonobangela emva ubusela, ngokunjalo lokubeka ukuphumeza amanyathelo okuthintela enye lomnqweno yimfumba. bembuza, le nkampani kwakhona inoxanduva ukufumanisa abahlaseli emva lomnqweno yimfumba. Further, umqhubi wotshintshiselwano kuya kufuneka kwakhona ukuphendula abathengi ukuvavanya umonakalo ngendlela eyaneleyo. Le uphuculo ishishini ukuze Tech Bureau lwesibini kwiinyanga ezintathu zokugqibela.
abathengisi imveliso WalMart ukuba usebenzise inkqubo yokulandela blockchain
WalMart uceba ukuthengisa nemifuno eluhlaza ukuba zilandelelwe usebenzisa iteknoloji blockchain phakathi kunyaka olandelayo. umthengiseli wehlabathi inkulu kokubini ingeniso kwaye ngumsebenzi wehla isaziso sokuba loo nto babaxelela nabathengisi ukwenzela imveliso eluhlaza enamagqabi yokuhlanganisa inkqubo yokulandela blockchain-based yakhiwe ngentsebenziswano ne-IBM ngoSeptemba 2019.
Nayiphi na inkampani esebenza WalMart kufuneka asebenze kunye nothungelwano IBM Ukutya Trust ukwenza ekupheleni-to-ekupheleni ukulandeleka. Uhambise iza xa kwehle i E. coli ukuqhambuka eyaqala Arizona ekuqaleni kwalo nyaka. WalMart likamongameli nokhuseleko lokutya Frank Yiannas uthe “Akukho namnye iingxowa zala isaladi waba 'Yuma, Arizona’ phezu kwabo. Kwilixa elizayo, usebenzisa iteknoloji siza efuna, umthengi abanokufumana ukuvavanya nengxowana isaladi kwaye siyazi ngokuqinisekileyo apho avela khona.”
Malaysia ibukeka blockchain benabo yayo 3 amashishini amakhulu
Urhulumente Malaysian ufuna ukuhlola izisombululo blockchain kumashishini zesizwe ezithathu ezizezona zikhulu: umoya ovuselelekayo, namafutha esundu, kunye nemali Islamic. A amandla umsebenzi onikwe igama Malaysian Industry-Government Group for High Technology (angase) iza iziphendu ukuya amkele blockchain kwishishini ngalinye ukwenzela ukwandisa obala, uzinzo, yaye ukusebenza ngokutsho ingxelo epapashwe kwiveki yokugqibela.
MHLAWUMBI ubambe iintetho kunye neenkampani amandla e-Malaysia ukuvavanya iindlela ade usebenzisa blockchain ukwandisa ukwamkelwa eneji ehlaziyekayo. Ngokuphathelele Palm Oil, Ulwamkelo blockchain nga kunceda ukuchonga imisebenzi eqinisekisiweyo ioli yesundu kunye imikhuba kwaye kuvumela abathengi ukuchonga umthombo ioli yabo yesundu ngaphambi kokuba uthenge. Malaysia Kwakhona, ukhangela indlela blockchain sinokunceda lulungisa iindleko zomthetho zemali amaSilamsi ngoxa ithobelana nomthetho elifuna, ezifana imfuneko tangle asethi lwetyala baxhaswa. Sele ezibhankini kuMbindi Mpuma sele beqalisile pegging amatyala kwiiyunithi zegolide kunye emele ityala isivumelwano smart kwi blockchain, njengoko Forbes kuye ingxelo. Iinkampani Crypto e Dubai neMalaysia aye ibiqhotyoshelwe izibalo zegolide kwiiyunithi cryptocurrency ukuvumela indalo yetyala ezingqinelanayo nomthetho elifuna.
Ingxelo Daily Market Kraken for 24.09.2018
$117M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin, Lets...
Thumela & Receive Ethereum &a...
Post Previous:Blockchain News 24.09.2018
Post Next:Blockchain News 04.10.2018